Shir London lagu qabtay oo arrimaha cusub ee Soomaaliya lagaga faalloonayey: Qore Maxamuud Ibrahim (Xaaji) | Saadaal Media
Shir London lagu qabtay oo arrimaha cusub ee Soomaaliya lagaga faalloonayey: Qore Maxamuud Ibrahim (Xaaji)
a) Tan koowaad, Waxaan la yaabay sida Soomaalidu ugu nugushahay Ferenjiga (ninka cad). Waxaad arkaysaa qaar ku bilaabaya, mudane Kay waxaan kaaga mahadcelinaynaa sidii fiicnayd ee aad Soomaaliya usoo gacan qabatay, wax weyn baad noo tartay. Qaar ku bilaabaya ma xusuusataa waxaynu ku kulannay meel hebla [Gaalkacyo] magalada anaa ku darsaday! iyo isagoo leh dad badan baan la kulmay ma wada xusuusto magacyadooda!. Waxa ka mid ah qaar ku bilaabaya “maadaama aad khabiir ku tahay arrimaha Soomaalida” hadda way ogyihiin laba sano iyo badh keliyuu joogey Soomaaliya!